မြေအရောင်းအဝယ် စာချုပ်ချုပ်ဆိုပုံ အဆင့်ဆင့်...! - Thadin
HomeKNOWLEDGEမြေအရောင်းအဝယ် စာချုပ်ချုပ်ဆိုပုံ အဆင့်ဆင့်…!
May 15, 2019 Kay Kay KNOWLEDGE Comments Off on မြေအရောင်းအဝယ် စာချုပ်ချုပ်ဆိုပုံ အဆင့်ဆင့်…!
“မြေ”….အဆောက်အအုံ ဆိုတာ အရွယ်အစား အမျိုးမျိုး ရှိကြသည့် အတိုင်း မည်ကဲ့သို့သော အဆောက်အအုံကို ဆောက်လုပ်မည်ဖြစ်စေ အခြေခံ အကျဆုံး လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ မြေကွက်လပ် ရှိမှသာ ဆောက်လုပ်လို့ ရနိုင်မည် မဟုတ်ပါ လား၊ ကိုယ်ပိုင် မြေကွက် ရှိပြီးသူများအဖို့ မိမိပိုင်ဆိုင်သော မြေကွက်ပေါ်တွင် အရှုပ်အရှင်း ကင်းစွာဖြင့် မိမိစိတ်တိုင်းကျ ဆောက်လုပ်နေထိုင်ခြင်း၊
လွပ်လပ်စွာ ရောင်းဝယ်ခြင်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်သော်လည်း မြေကွက်ဝယ်ယူ၍ ဆောက်လုပ် နေထိုင်မည့်သူ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့်သူများကတော့ စိတ်ချယုံကြည်မှု ရှိစေရန်အတွက် ပိုင်ဆိုင်မှု ခိုင်မာရန် လုပ်သက်ရင့် ရှေ့နေများ၊ အကျိုးဆောင်များဖြင့် စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ မြေ အရောင်း အဝယ်များ ပြုလုပ်ရန် အတွက် စာချုပ် ချုပ်ဆိုပုံ အဆင့်ဆင့်လေးတွေကို ပြန်လည် မျှဝေလိုက်ရပါတယ်..
“မွေ”….အဆောကျအအုံ ဆိုတာ အရှယျအစား အမြိုးမြိုး ရှိကွသညျ့ အတိုငျး မညျကဲ့သို့သော အဆောကျအအုံကို ဆောကျလုပျမညျဖွဈစေ အခွခေံ အကဆြုံး လိုအပျခကျြဖွဈတဲ့ မွကှေကျလပျ ရှိမှသာ ဆောကျလုပျလို့ ရနိုငျမညျ မဟုတျပါ လား၊ ကိုယျပိုငျ မွကှေကျ ရှိပွီးသူမြားအဖို့ မိမိပိုငျဆိုငျသော မွကှေကျပျေါတှငျ အရှုပျအရှငျး ကငျးစှာဖွငျ့ မိမိစိတျတိုငျးကြ ဆောကျလုပျနထေိုငျခွငျး၊
လှပျလပျစှာ ရောငျးဝယျခွငျးမြား လုပျဆောငျနိုငျသျောလညျး မွကှေကျဝယျယူ၍ ဆောကျလုပျ နထေိုငျမညျ့သူ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမညျ့သူမြားကတော့ စိတျခယြုံကွညျမှု ရှိစရေနျအတှကျ ပိုငျဆိုငျမှု ခိုငျမာရနျ လုပျသကျရငျ့ ရှနေ့မြေား၊ အကြိုးဆောငျမြားဖွငျ့ စနဈတကြ ဆောငျရှကျရမှာဖွဈပါတယျ။ ထိုကဲ့သို့ မွေ အရောငျး အဝယျမြား ပွုလုပျရနျ အတှကျ စာခြုပျ ခြုပျဆိုပုံ အဆငျ့ဆငျ့လေးတှကေို ပွနျလညျ မြှဝလေိုကျရပါတယျ..
ဒူးရင်းသီးနဲ့တွဲဖက်ပြီး စားလို့မရတဲ့ အစားအစာများ (သေနိုင်)
Total views : 2716202